Thursday December 01, 2016 - 11:38:14 in Wararka by Super Admin
Dowladaha ku mideysan OPEC ee soo saara shidaalka ugu badan caalamka ayaa isku raacay in la dhimo shidaalka ay sida maalinlaha usoo saaraan, arrinkaas oo durbadiiba sababay sare ukac ku yimid shidaalka adduunka.
Max’med Bin Saalax Al-saadah oo ah wasiirka Batroolka dowladda Qadar ahna guddoomiyaha Ururka OPEC ayaa warbaahinta u sheegay in dowladaha shidaalka soo saara ay isku raaceen in ladhimo maalin walba 1,2 Milyuun oo Bariil si suuq wanaagsan loogu helo dahabka madoow oo ah shidaalka ay soo saaraan dowladaha dhaqaalahoodu uu ku tiirsanyahay batroolka.
Kadib go’aanka OPEC durbadiiba sare ukac ayaa laga dareemay seyladaha shidaalka adduunka, 8,4% ayaa la sheegay in uu sare ukacay qiimaha shidaalka gaar ahaan Baziinka.
Dowladda Sacuudiga oo ah dowladda ugu tunka weyn ee soo saarta shidaalka caalamka ayaa dhankeeda sheegtay in 500-kun Barmiil ay maalin walba dhimi doonto.
Dowladda Ruushka ayaa iyana sheegtay in 300-kun barmiil ay dhimi doonto waxsoo saarkeeda shidaalka maalin walba inkasta oo Ruushka uusan xubin ka aheyn ururka OPEC.
Shir bila ka hor ka dhacay wadanka Al Jazaa’ir ayay dowladaha OPEC ku sheegeen in xal waara ka gaari doonaan hoos udhaca ballaaran ee ku yimid shidaalka adduunka.
Waa hoos u dhicii ugu ballaarnaa ee lagu sameeyo soo saarka shidaalka adduunka tan iyo sanaddii 2008 xilligaas oo dowladaha soo saara shidaalka ay ku heshiiyeen in ay hoos u dhigaan xaddiga shidaalka ay soo saaraan si dhaqaalahoodu usoo kabsado.